How To Produktdaten Auf SEO Auswirken - Semalt
Ho an'ny e-Commerce-kaontenera dia ny fampiasana finday masimihetsika tsara indrindra no mahatonga azy ho tompon'andraikitra amin'ny lafiny tsara kokoa. Ny SEO-Strategie maro dia tsy miankina amin'ny vokatra azo avy amin'ny vokatra. Mifantoka amin'ny sehatra toy ny Keyword-Search, ny fiverenana, ny tambajotra sosialy-media sy ny lafiny ara-teknika - piantane classiche con paralume recessed. Misy indraindray indraindray anefa mety hampiakatra ny vokatra SEO anao.
Jack Miller, tompon'andraikitry ny Customer Succcess Manager Semalt Digital Services, nanazava, toy ny vokatra vokarin'ny vokatra.
Product data dia tsy mivantana amin'ny SEO. Ny zava-drehetra dia nifototra tamin'ny adiresy Internet, URLs ary ny votoatin-kevitra, saingy ny tanjona dia ny fiantraikany eo amin'ny famolavolana ny fikarohana organika. Raha hameno ny tranokalanao miaraka amin'ny data ianao, dia hizara vaovao momba ny sokajy, sokajy, ary tolotra rehetra ho an'ny vokatra rehetra izay tianao hampidirina ny rafitra. Ny vohikala rehetra dia manana Content-Management-System izay manitsy io vaovao io amin'ny alalan'ny kitiho ao amin'ny database. Ireo rehetra ireo dia mamaritra ny valin'ny famaritana ny vokatra sy ny vaovao rehetra.
SEO dia mitahiry ireo lafin'ny hatsaran'ny vokatra, URLs ary descriptions. Amin'ny ankapobeny, ny vokatr'ireo vokatra ireo dia mampiseho ny fomba sy fomba fampahafantarana amin'ny tranonkala Database. Tahaka ny vokatr'ilay vondrona, vondrona, vernet ary etikettiert, dia misy vokany eo amin'ny sehatr'asa ho an'ny mpampiasa. Ity Kriterium ity dia iray amin'ireo trangan-javatra nokarohin'ny Google ho fanaraha-maso ny Content-Management-System momba ny laharana.
Raha ny lohan-tsokajy dia mety ho iray amin'ny sokajy: - Ziel> Shirts> Herrenhemden> Halblang. Ity pejy ity dia afaka mividy ny akanjom-behivavy iray manontolo, izay ho an'ny sokajy ho an'ny sokajy sy ny sokajy ho an'ny sokitra. Ny vokany dia ny singa-sektion ary koa ny Halbe-Neck-group. Ny vokatra anarana dia ny lohatenin'ny H2 sy ny famaritana amin'ny Meta-Description.
Votoatiny dika mitovy
Ny dindon'ny endri-tsoratra dia manondro, raha mitady URL maromaro maromaro ao amin'ny pejy an'io. Ohatra, afaka mandefa duplicate ny fikandrana miaraka amin'ny kanonische tags. Doubtless content can be harmful to your SEO. Manamora ny fahamendrehana ny pejy iray, satria ny adiresy amina URL maromaro no nampitaina, dia vao mainka nampihetsi-po.
Ny fanovana ny duplicate dia tsy dia tsotra loatra. Tsy maintsy mitady URL ny URL rehetra, izay manondro zavatra mitovy amin'izany. Ny fampidirana ireo rohy mankany amin'ny pejy tianao dia afaka manampy anao hamerina indray ny fahefany amin'ny tranonkala hafa. Raha ohatra ka manoratra ny code na mametaka 301 Ctrl-Codes, dia mety hamaha io olana io ary haverina indray ny fomba amam-panaovana ny tranokalan'ny tranokala.
SEO dia manan-danja ho an'ny tolotra ara-aterineto rehetra, raha toa ka manome antoka ny fidirana an-tserasera. Ny votoatiny azo atonta printy Rohy maharitra Fampahalalana mikasika ny pejy Hitanisa ity pejy ity Ireo vokatra ireo dia ny vokatra. Amin'ny ankapobeny, ny Marketing Marketing dia tsy nahomby, ny fahatsapany ny SEO ho fantatra ary matetika tsy fantatra. Na izany aza, ny fiheverana ny URL sy ny zava-misy ao an-tsainao, araka ny hita, dia misy vokany eo amin'ny fomba fanamarihan'i Google amin'ny tranonkala. Amin'ny fampiasana ireo fahalalana ambony dia afaka maneho ireo vokatra izay mitrandraka ny fomba fiasa toy ny vokatra amin'ny famoahana ny vokatra. Azo atao ihany koa ny manitsy ny ankamaroan'ny fahadisoana toy ny tsy fahampian'ny sokajy na ny vokatra vaovao.